Hardware | ဇော်မျိုး
English Speaking သင်ခန်းစာများ
External Hard Disk ကို partition ဘယ်လိုပိုင်းမလဲ…
24/01/2012 Leaveacomment
External Hard Disk ကို partition ဘယ်လိုပိုင်းမလဲ
ကျွန်တော် “External Hard Disk ကို Partition ဘယ်လို ပိုင်းမလဲ” ဆိုတဲ. စာအုပ် လေးတင်ပေးချင်ပါ။ ကျွန်တော် တင်ပေးတဲ. ရည်၇ွယ်ချက်ကတော. External Hard Disk ၀ယ်ပြီး Partition မပိုင်းတတ်သူတွေ အတွက်သာ ၇ည်၇ွယ်ပြီး တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပုံလေးတွေနဲ.တကွ တစ်ဆင်.ခြင်း ရှင်းပြထားတဲ. အတွက် တော်တော်လေး လွယ်ကူပါတယ်။
ဖိုင်ဆိုဒ် – 1.25M
Filed under book Tagged with Hardware
ကွန်ပျူတာ ပြုပြင်ခြင်း နည်းလမ်းများ…..
22/01/2012 Leaveacomment
ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာ ပြုပြင်ခြင်းနဲ. သက်ဆိုင်တဲ. စာအုပ်လေးတစ်အုပ်တင်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာပါတဲ. ကွန်ပျူတာ ပြုပြင်ခြင်း အကြောင်းအ၇ာလေး တွေကို စာေ၇းသူက သူ.အတွေ.အကြုံလေးတွေပါ ထည်.သွင်းေ၇းသားထားတဲ. အတွက်တော်တော် ကောင်းတဲ. စာအုပ်လေး တစ်အုပ်လို. ပြောချင်ပါတယ်။
ေ၇းသားသူကတော. ကိုဖြိုးမြင်.သိန်း ပါ။
ISA server 2006 (မြန်မာ)
26/11/2011 Leaveacomment
ISA server 2006 (မြန်မာလို)ေ၇းထားတဲ. စာအုပ်လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ်လို.ထင်ပါတယ် အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ သုံးတဲ. proxy server လုပ်နည်းစာအုပ်လေးပါ။ A+ သင်တန်းတက်ပြီး လက်တွေ.နယ်ပယ်ထဲ ၀င်ေ၇ာက်လုပ် ကိုင်ပြီဆို၇င် ဒီစာအုပ်လေးတွေက တော်တော် အသုံးဝင်ပါတယ်။
Laptop ပြုပြင်ခြင်း စာအုပ်ပါ……….
19/11/2011 Leaveacomment
ဒီစာအုပ်လေးကတော. Notebook , Laptop , Netbook and Desktop ရဲ့ ကွာခြားချက်များကို
ဖော်ပြပေးတဲ. စာအုပ်လေးတစ်အုပ်။ laptop သုံးတဲ. သူတွေအတွက် အသုံးဝင်မယ်ထင်လို. တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုစာအုပ်လေးတွေဖတ်ပြီး laptop တွေကို ကလိကျတာပေါ.ဗျာ 😛
ေ၇းသားသူကတော. မြန်မာမိသားစု ဖို၇မ်က မုန်းလေးပါ။
ဒေါင်းလို. အဆင်မပြေ၇င် ကွန်.မန်.လေး ချန်ခဲ.ပါ။
ကွန်ပျူတာ ပြုပြင်စဉ် စဉ်းစား၇မည်. အချက်များ
27/06/2011 Leaveacomment
ကိုစံငြိမ်းေ၇းသားတဲ. ကွန်ပျူတာ ပြုပြင်စဉ် စဉ်းစား၇မည်. အချက်များ စာအုပ်ပါ။ကွန်ပျူတာ မပြင် ခင်ဒီစာအုပ်လေး အ၇င် ဖတ်ပြီး စက်ပြင်တာပေါ.ဗျာ။
သင့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာ window တက်တာကြာနေလို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား
26/06/2011 Leaveacomment
Run box မှာ regedit ဟုရိုက်ပါ။ Register Editor ဆိုတဲ့ box ကျလာပါမယ်
Session manager\_Memory management မှ prefetchparaters click
လုပ်ပါ ညာဘက်က box ထဲမှာ Enable prefetcher
ကိုထပ်ပြီး ရှာလိုက်ပါဦး တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ right click ထောက်ပြီး
Edit Dword ဆိုတဲ့ box ထဲက value data မှာ မူလက ၃ နေရာမှာ
Ok ပေါ့ဗျာ…..အခုဆိုရင် ညီအစ်ကို မောင်နှမတို့ ရဲ့
ကွန်ပျူတာဟာ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ start နိုင်ပါပြီ
Filed under ဗဟုသုတ Tagged with Hardware
Android Application ရေးသားနည်း…
ကကကွန် က ထုတ်ပီးသမျှ မြန်မာလို စာအုပ်များဒေါင်းမယ်..
Mouse Pointer မှာပုံလေးတွေနဲ. အလှဆင်၇အောင်..
USB အကြောင်း သိကောင်းစ၇ာ….
Game ဆော.ရင်း Typing ကျင်.၇အောင်…
G talk အကောင်. လွယ်လွယ်ဖွင်.ကြည်.ရအောင်….
Desktop Fun Digital English facebook Game G talk Hardware internet magazine Mobile Nero Network Networking phone Photoshop PowerPoint Programming Recover software storage USB wallpaper window7 Youtube ကကကွန် ဗဟုသုတ
software ဒေါင်း၇န် ၀က်ဆိုဒ်
မြန်မာ IT Development